Shiinaha Lipstick mashiinka calaamadeynta hoose iyo Soosaarka | S-conning
S911 Lipstick Mashiinka Calaamadeynta Xawaaraha Sare
Mashiinka oo dhan waxaa gacanta ku haya kumbuyuutarka, dhalooyinka ballan qaadka ee otomaatig ah oo si iskumid ah u calaamadeeya, iyo qalabka sidoo kale waxaa lagu qalabeyn karaa mashiinka daabacaadda kulul.
Qaadashada nidaamka mashiinka adeegga ee xawaaraha sare leh.
-Waxaa lagu dabaqi karaa noocyada kala duwan ee kartoonka lagu calaamadeeyo kartoonka.
- Xawaaraha xasilloon: 0-250 kumbiyuutar / daqiiqad;
Nidaamka calaamadeynta saxda ah ee saxda ah, oo leh dulqaadka calaamadeynta ± 1mm;
- Habka otomatiga-toosinta ee silsilad isku mid ah si loo hubiyo in walxaha deggan la kala wareejiyo iyo booska saxda ah;
-Xayeysiiyaha oo dhameystiran wuxuu korsaday SUS304 ahama iyo A6061
S911 sidoo kale waa Khadadka Lipstick Production Main Waxay ku habboon tahay daawada, kiimikooyinka maalinlaha ah, sheyga daryeelka shakhsi ahaaneed, warshadaha cuntada, weelka qurxinta iwm ee dhalada ah ama yar weelka wareega ee dusha sare ee calaamadeynta, Mashiinka Mashiinka Dhalada wareega ee otomaatiga ah oo leh daabacaad taariikhda.
Weelasha wareega (sida dhalooyinka wareega, lipstickka, dhalooyinka, iyo koobabka) ayaa si toos ah loogu dhejiyaa rollers-ka shaqaaluhuna wuxuu ku hawl galayaa shidida gacanta. Rollers waxay rogayaan dhalada maadaama calaamadda si sax ah loogu dhajiyay dhalada. Mashiinka waxaa si koronto ahaan ah loogu shaqeeyaa qalabka sumadaha korontada ku shaqeeya ee saxda ah. Mashiinka wuxuu awood u leeyahay inuu ku habboonaado cabbirka kaladuwan ee kaladuwan iyo weelka wareega.Mashiinka waxaa loo habeyn karaa beddelka baaldiga iyo sida ay macaamiishu u baahan yihiin.
Cabbir (L) 2400 x (W) 1206x (H) 1800mm
Cabbirka weelka (H) 10-280mm (W) 50-340mm
Hore: Xawaaraha sare ee samaynta kartoonka tooska ah iyo khadka wax soo saarka ee la gelinayo
Xiga: S921 sumadaha tuubada jilicsan ee xawaaraha sare leh
Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha, Top Iyo Labeler Labeler, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta,